Xalayaa banaa-Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif
Dhimmisaa: Dhaabbanni Akkaadamii Afaan Oromoo akka dhaabatu gaafachuu ta'a.
Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti erga afaan hojii mootummaa, afaan barnootaa, barnoota afaanii, afaan qo'annoofi qorannoo, afaan barreeffamaafi afaan saayinsiifi teeknoloojii ta'ee waggoota 20 dabarsee jira. Manneen barnootaa sadarkaa gadii hanga oliittis baratamaa jira. Akka kanaan, ogeessonni afaan kanaa sadarkaa digirii lammataan (MA) eebbifaman hojii sektera adda addaa keessatti ramadamanii hojjechaa jiraachuunis beekamaadha. Yuunvarsiitii Wallaggaa keessattis bara 2008 (ALI.) kaasee sadarkaa digirii sadaffaa (PhD) baratamaa jira. Deemsi jalqabame kun Afaan Oromootiif daandii guddinaati. Waan jajjabeeffamuu qabudhas.
Ta'us, waggoota darban kana dhiibbaan adda addaa godhamee Afaanichi akka hinguddifamne taasifamaa tureera. Har'ammoo, tattaaffii hayyotaan aggaammiin diinni Afaanicha balleessuuf godhe fashalee boqonnaan haarawaan banamaa jira. Afaan kun sadarkaa biyaarrattillee Afaan hojii akka ta'u qabsoon ittuma jirama. Gama keessaniinis waadaan galame nijira. Sana karaa saayinsawaa ta'een raawwachuuf qorannoo hojjechuunis barbaachisaadha. Hojiin dagaagina Afaan Oromoof taasifamaa jiru akka dhugoomuuf garuu giddugaleessi tokko jiraachuu qaba. Akkuma Mootummoonni naannoon biroo Akkaadaamii Afaan ofii dhaabbatanii guddifachaa jiran afaan kanaafis giddugalli tokko dhaabbachuu qaba.
Dhimmi ijoon xalayaa kanaas Finfinnee keessatti Giddugalli Akkaadaamii Afaan Oromoo (Center of Afaan Oromoo Academy) tokko akka dhaabbatu gaafachuudha. Giddugala kana hundeessuuf baroota darban keessa sosochiin hayyootaa akka ture quban qaba. Gama siyaasaatiin rakkoon waan tureef garuu hinmilkoofne. Amma immoo haalli kun jijjiiramaa waan jiruuf yoo itti deemame gaarii ta'a. Giddugalli Akkaadamii Afaan Oromoo yoo dhaabbate bu'aa akkamii qaba?
1. Afaan Oromoo waaltessuu keessatti hojii hayyotaa walitti fiduun labsiin mirkaneessa.
2. Qorannoo Afaan Oromoo faffaca'ee jiru kallattii tokkorraan akka hogganamu gochuu.
3. Afaan Oromoo abbaa argata. Dogoggorri gama barreeffamaanis ta'e eessanuu uumamu qajeelchuu.
4. Kitaabilee Afaan Oromoon barreeffaman ga'umsa akka qabaatun taasisuu,
5. Aggaammii qorannoo adda addaa dahatee Afaan Oromoo qoocarsu fashalsuufi kkf.
Kanaafuu, Giddugala Akkaadaamii Afaan Oromoo dhaabuun Afaan Oromoo guddisuun yeroonsaa amma! Mootummaan Naannoo Oromiyaas kana hubatee tumsa akka taasisu amantaa irraa qabna. Xalayaa kana dubbistanii qaama dhimmi ilaallatuun waan naaf geessaniifis durseen isin galateeffadha!
Barreessaa Fi Yunivarsitii Wallaggaatti Barsiisaa Afaan Oromoo.
-Biiroo Barnootaa Oromiyaaf
-Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaaf
-Giddugala Aadaa Oromoof,
-Inistiitiyutii Qoranoo Oromoofi Afro-Ashiyawaa Yuunvarsiitii Wallaggaaf
-Inistiitiyutii Qorannoo Oromoo Yuunvarsiitii Jimmaaf
-Hayyoota Oromoo maraaf!!